I-Semalt: Ama-Plugins we-WordPress - Kufanele Usebenzise Kangakanani?
I-WordPress inabantu abaningi emhlabeni mayelana nesicelo sayo. Ngenye ye-CMS engcono kakhulu lapho. Ama-Bloggers amaningi kanye ne-eCommerce startups babheka i-WordPress ngenxa yokwethembeka kwayo kulokho okukunikezayo. Ngaphezu kwalokho, amawebhusayithi e-WordPress ahambisana nezinhlobonhlobo zezingqikithi kanye nezifiso ukuze kuhambisane nezidingo zakho zewebhu. Ukukhohlisa okulula okukwenziwa ngokwezifiso kusetshenziswa ngokusebenzisa ama-plugin. Ama-plugin yizici zetheksthi lakho le-WordPress elingakongeza inani endleleni iwebhusayithi yakho ephendula ngayo.
Ama-Plugin asiza ngezindlela eziningi ikakhulu uma udinga umsebenzi wangokwezifiso. Kufanele uqaphele ukuthi ama-plugin amaningi we-WordPress afika njengezingxenye zezingqikithi. Izinguquko zingase zilahleke uma ushintsha noma ushintshe isihloko sakho. Kodwa-ke, amanye ama-plugin we-WordPress esayithi angagcina amanye amakhodi wekhodi kulezi zimo. U-Alexander Peresunko, isazi esihamba phambili se Semalt , uchaza ukuthi ukusebenzisa ama-plugin kungathinta ukusebenza kwethimu yakho.
Zingaki ama-plugin we-WordPress 'amaningi kakhulu'?
Njengoba kubonisiwe ngenhla, ama-plugin yizinkomba zekhodi ze-PHP ezengeza ukusebenza kwi-WordPress site yakho yamanje. Kodwa-ke, njengoba uqhubeka nokumisa iwebhusayithi yakho, isikhathi sokuphendula sesistimu singase siqale ukwehla. Amawebusayithi amaningi aphansi kakhulu, ahlukumeza kabi injini yokusesha . Njengoba kubonisiwe ngenhla, izithonjana zisebenza njengokungeza imigqa yekhodi kuwebhusayithi jikelele. Kule ndaba, njengekhodi yokukhulisa isayithi, ijwayele ukuphuza..I-Google isebenzisa ukuphendula kwe-webhusayithi njenge-factor factor ku-SERP yabo.
Esikhathini esisebenzayo, uma usebenzisa ama-plugin angaphezu kuka-30, angase angashintshi ukuphendula kwewebhusayithi yakho. Kwezinye izimo, ukubeka ikhodi eningi kusayithi lakho yilokho okuchaza isikhathi sakho sokuphendula. I-plugin enezinkinobho eziningi kakhulu ingaba nomthelela ofanayo kuwebhusayithi usebenzisa ama-plugin amaningi. Njengekhodi yewebhusayithi, udinga ukukhumbuza mayelana nekhodi isayithi elisebenzayo.
Yiziphi ama-plugin amahle kakhulu angayisebenzisa?
Isinqumo sokusebenzisa i-plugin ye-WordPress incike kuwe. Ungase ufune ukufeza umphumela oyingqayizivele. Kulesi simo, kungabalulekile ukwenza iplagin yakho yangokwezifiso ye-PHP. Esihlokweni esandulele, kunezindlela eziningi zokuthuthukisa ama-plugin alula. Uvele udinga ulwazi lwezobuchwepheshe lwezakhiwo zefayela le-WordPress. Ngokufanayo, kungase kudingeke ukwazi ukuhlela ifayela le-PHP usebenzisa i-notepad elula.
Ama-Plugin akuwona okukhethwa kukho okumele abe nakho. Noma kunjalo, kukhona amanye ama-plugin ebalulekile angenza iwebhusayithi yakho ibe ngcono. Amanye ama-plugin we-WordPress kufanele abe ne-akhawunti ahlanganisa:
I-WordPress SEO nge-Yoast:
Kubantu abafuna ukwandisa isayithi labo ekuboneni injini yokusesha, le plugin iqukethe zonke izici ezibalulekile ze-SEO. Kusuka kumagama angukhiye ukusesha ukucaciswa kwemeta, kunezimo eziningi lapho abantu benza amapulagi awusizo.
Lokhu konke ku-plugin eyodwa okusiza umuntu ukuphatha izici ezibalulekile ze-database yakho. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukufaka noma ukulungisa imininingwane yakho. Ungakwazi futhi ukusekela iwebhusayithi yakho ukuguqula izinguquko uma kwenzeka into engalungile.
W3 Ingqikithi yenqolobane:
Le plugin ingasiza iwebhusayithi yakho ithuthukise ithrafikhi. Kuyasiza ukugcina umsebenzisi owake wavakashela ngokubanika izikhangiso eziningi kuwebhusayithi yakho.